High SpecTwin Bed En Suite e Monkstown Co. Dublin - I-Airbnb
High SpecTwin Bed En Suite e Monkstown Co. Dublin
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguSean And Mary
Indlu yethu ime kwidolophana entle engaselunxwemeni yaseMonkstown kwindawo ethe cwaka eCul de Sac ekwindlela ephambili. Zininzi iivenkile zokutyela iivenkile ezithengisa izinto ezithengiswayo, zonke iindawo ezikufutshane nathi. Sisebenza kakuhle ngezithuthi zikawonke-wonke. Inkonzo yeDart neBhasi ekumgama wemizuzu embalwa xa uhamba ngeenyawo. I-Aircoach yeyona ifanelekileyo ukufika endlwini yethu. Sizimisele ngokugqibeleleyo imidlalo kunye neekonsathi I-The Dart stop kwi-Aviva Stadium for Rugby, iiKhonsathi, kunye neekonsathi kwi-3 Arena
Igumbi esilinikezayo lisandula ukuyilwa ngokutsha kwaye lalungiswa ngokupheleleyo. Sinikezela, i-WiFi encomekayo, ikofu kunye neti, ubisi olutsha lunikezelwa kwifriji, kunye namanzi. Igumbi ngokwalo likhulu kakhulu kwaye liphangalele liqaqambile ngokukhanya okuninzi kwendalo kodwa linebhonasi eyongeziweyo yeemfama ezimnyama. . Sinikezela ngesithuba esaneleyo sewodrophu egcwele iidrowa Iibhedi zikhululeke ngokugqithisileyo ngoomatrasi benkumbulo entsha ye-foam Yonke ilinen yebhedi kunye neetawuli zintsha. Multichannel T.V Ininzi yesokethi. Iindwendwe zinesango lazo labucala.
IMonkstown yilali endala enobuhlobo enevenkile zangoku, iivenkile zekofu kunye neendawo zokutyela ezimangalisayo nokuba uyafuna ukufumana isidlo sasemini, isidlo sangokuhlwa, okanye ikofu nje. Thatha ujikeleza ilali kwaye uthande uyilo oludala kunye nolutsha. Ungahamba ecaleni konxweme ukusuka eSeapoint ukuya eDun Laoghaire kwaye njengoko abantu abaninzi besenza, ukonwabele ukuhamba ecaleni kwepier.
Umbuki zindwendwe ngu- Sean And Mary
Ndamkela iindwendwe ekufikeni kwazo, ndidlule kwizinto eziluncedo egumbini kwaye ndibancede bazinze. Ndilapha ukubanceda ngayo nayiphi na imibuzo abanayo. Ndingasoloko ndifowunelwa ngomnxeba xa kukho imfuneko.